Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Xaalada Magaalada Marka. – Calamada.com
Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Xaalada Magaalada Marka.
calamada August 19, 2018 1 min read
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaallo culus oo maanta dib uga qarxay magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose.
Dagaallada oo bilaawday maanta gelinkii dambe ayaa yimid kadib markii maleeshiyaad katirsan Dowladda Federaalka ay saaka aroortii hore gudaha ugaleen magaalada balse waxay iska caabin kala kulmeen ciidamada Al Shabaab.
Wararka ka imaanaya Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in ciidamada Al Shabaab ay dib ula wareegeen dhammaan xaafadaha magaalada Marka kadib dagaal saacado badan qaatay oo ay maanta gelinkii dambe lagaleen ciidamo daacad u ahaa Jeneraal Caanood.
Goob joogayaal ayaa sheegaya in dagaalkii maanta oo ay ka qeyb qaadanayeen gaadiidka Tiknikada ay sababeen khasaara dhimasho iyo dhaawac ah, Meydadka ciidamo katirsan dowaladda ayaa caawa Maqribkii lagu arkayay waddooyinka magaalada Marka.
Sidoo kale dadka magaalada ayaa sheegay in labada dhinac ay kala joogaan, dhabarka dambe ee isbitaalka Marka waxaa ku sugan ciidamada dowladda Federaalka halka xoogaga Al Shabaab ay gacanta ku hayaan magaalada inteeda kale.
Ciidamada Jeneraal Caanood ayaa galabta lagasoo riixay xaafadaha dhowr ah oo saaka aroortii hore ay dagaal la’aan qabsadeen balse Al Shabaab oo isisoo abaabulay ayaa si adag udifaacday magaalada Xeebta leh ee Marka.
illaa iyo hadda tira koob rasmi ah lagama haayo khasaaraha nafeed ee ka dhashay dagaalladii maanta illaa iyo caawa, boqolaal qoys ayaa durbadiiba bilaabay in ay isaga barakacaan magaalada.
Previous: Askari Lagu Dilay Magaalada Muqdisho.
Next: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka 09-12-1439 Hijri.